नवराज महतारा शुक्रवार, पुस २२, २०७३ 1285 पटक पढिएको
सिममकोट: फोतु ५ मुगुका ५ वर्षीय पवन नेपालीको कुपोषणका कारण मंसिर १८ गते ज्यान गयो । जिल्ला सदरमुकाम गमगढीदेखि दुई दिन पैदल दूरीका जग्गे नेपालीका जेठा छोरा पवन एक वर्षदेखि नै थला परेका थिए ।
यो वर्षको असोज मसान्तसम्म हुम्लाका कुल बालबालिकामध्ये १४ प्रतिशतमा कुपोषण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख डा. स्मृति महतले जानकारी दिइन् । पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कार्यक्रम (युनिसेफ) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित एक कार्यक्रमले स्क्रिनिङ गरेको जिल्लाका ४ हजार २ सय २३ बालबालिकामध्ये १ हजार ३ सय ७९ अर्थात् ३२ दशमलब ५६ प्रतिशतमा कुपोषण छ ।
जिल्लाको भूबनोट र खाने बानीमा भएको समस्याका कारण अधिकांश बालबालिकामा कुपोषण देखिएको डा. महत बताउँछिन् । उनकाअनुसार कुपोषणको मुख्य दोष गरिबी नै हो । उनी भन्छिन्, 'जिल्लाको सबै क्षेत्रका बालबालिकामा पोषणको अवस्था चिन्ताजनक भए पनि दक्षिण क्षेत्रका बालबालिकामा अझ बढी छ ।'
मुगुका बालबालिकाको कुपोषणको अवस्था पनि उस्तै छ । मुगु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको स्क्रिनिङमा २ हजार ६ सय ९ बालबालिकामध्ये १ हजार १५ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । तीमध्ये २ सय ९९ जनालाई गम्भीर प्रकारको (रातो) कुपोषण छ भने ७ सय १६ जनालाई (पहेंलो) सामान्य प्रकारको कुपोषण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका लोकबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुगुको भिई, सोरु भेगका बालबालिका बढी कुपोषित छन् ।
कर्णालीका बालबालिकामा धेरै कुपोषण हुनु गरिबी नै मुख्या कारण देखिएको छ । बिहान बेलुकाको दुई छाक राम्रोसँग टार्नसमेत समस्या भएपछि बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन समस्या भएको छ ।
१३ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण भएको जुम्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पछिल्लो समय जिल्लाका ६ गाविसमा गरिएको स्क्रिनिङमा ४८ दशमलब ७९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित छन् । ४ सय १४ जनामा १ जना निकै गम्भीर खालको कुपोषणबाट ग्रसित छन् भने २ सय १ जनालाई सामान्य खालको कुपोषण लागेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख डा. वैद्यनाथ झाले जानकारी दिए ।
भौगोलिक रूपमा नेपालकै ठूलो डोल्पा जिल्लामा भने अन्य जिल्लाको तुलनामा केही कम बालबालिका कुपोतषत देखिएका छन् । जिल्लाका सबै क्षेत्रबाट तथ्यांक लिन नसकिएको भए पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोल्पाका प्रमुख डा. श्रीकान्त अग्रवालले जिल्लाका ८ दशमलब ६० प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण देखिएको बताए । सबै क्षेत्रको तथ्यांक संकलन भए यो संख्या झण्डै दोब्बर हुने अनुमान उनको छ ।
खान नपुग्दा कुपोषण
कर्णालीका बालबालिकामा धेरै कुपोषण हुनु गरिबी नै मुख्या कारण देखिएको छ । बिहान बेलुकाको राम्रोसँग दुई छाक टार्नसमेत समस्या भएपछि बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन समस्या भएको स्याँडा १ हुम्लाकी देवकी शाहीले बताइन् । ३ सन्तानकी आमा देवकीले भनिन्, 'बिहानदेखि बेलुका अबेरसम्म खेतबारीमा काम गर्न जानुपर्छ । बालबालिकालाई रोटी र बासी भात राखेर घरमै छोड्नुपर्ने बाध्यताले यस्तो अवस्था आएको हो ।'
सिपखाना ६ कालीकोटका नौलाराज योगी भन्छन्, 'दिनभर मरिमरी काम गर्‍यो बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ हुन्छ । अनि कसरी बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाना खुवाउने ?' सरकारले कर्णालीका बालबालिकालाई भनेर दिएको २ सय रकम कम भएको बताउँदै योगीले सरकारले भन्ने नारा र गर्ने व्यवहार फरक भएकाले पनि समस्या परेको बताए ।
घरमा जे छ त्यही खुवाउने गरेको बताउँदै धौलागोह ३ कालीकोटकी सीता विक भन्छिन्, 'स्वास्थ्य संस्था नजिक नभएकाले पनि आफ्ना बालबालिकामा के रोग लाग्यो भन्ने जानकारी पाउन समस्या भएको छ । चौबीसै घन्टा हाडछाला माटोमा घोटे पनि दुई छाक टार्न पुग्दैन ।'
भौगोलिक रूपमा निकै विकट कर्णालीमा खान नपुग्ने र खान पुगे पनि खाना खाने बानीमा सुधार नआएसम्म बालबालिकामा लाग्ने कुपोषणले जरा गाडी रहने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाकी निमित्त प्रमुख डा. स्मृति महत बताउँछिन् । गाउँको खाना पोषिलोभन्दा पनि छाक टार्नका लागि खाने गरेको डा. महतको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, 'सरकारले दिने अनुदानको चामल र सामान्य दाल मात्रै खान्छन् । तरकारी कही खाँदैनन् । त्यही खाना बालबालिकालाई खुवाउने गरेकाले पनि जिल्लामा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको हो ।'
मुख्यमन्त्रीलाई टेर्दैनन् कर्मचारी, प्रधानमन्त्रीसँग मागियो गुहार 4760